rich - Synonyms of rich | Antonyms of rich | Definition of rich | Example of rich | Word Synonyms API | Word Similarity API
Top 10 similar words or synonyms for rich
Top 30 analogous words or synonyms for rich
The Rich Fool တဖန် ဥပမာစကားကို မိန့်တော်မူသည်ကား၊ သူဌေးတဦး၌ မြေကောင်း၍ အသီးအနှံများလှ၏။ ၁၇ထိုသူဌေးက၊ ငါသည် အဘယ်သို့ ပြုရမည်နည်း။ အသီးအနှံများကို သိုထားစရာအရပ်မရှိ။ ၁၈ပြုမည်အကြံမူကား၊ ငါ့တိုက်များကိုဖျက်၍ ကျယ်သောတိုက်တို့ကို တည်ပြီးမှ၊ ငါ၏ အသီးအနှံဥစ္စာ ရှိသမျှတို့ကို သိုထားမည်။ ၁၉ငါ့ဝိညာဉ်အားလည်း၊ အချင်းဝိညာဉ်၊ သင်သည် နှစ်ပေါင်းများစွာသုံးဆောင်ရန် ဥစ္စာများကို သိုထား လျက်ရှိပြီ။ ငြိမ်ဝပ်စွာနေလော့။ စားသောက်ခြင်း၊ ပျော်မွေ့ခြင်းကို ပြုလော့။ ငါပြောမည်ဟု သူဌေးအကြံရှိ၏။ ၂၀ထိုသို့ အကြံရှိစဉ်တွင် ဘုရားသခင်က၊ အချင်းလူမိုက်၊ ယနေ့ညဉ့်ပင် သင်၏ဝိညာဉ်ကို ရုပ်သိမ်းရာ အချိန်ရောက်လိမ့်မည်။ သို့ဖြစ်၍ သင်သည် ပြင်ဆင်သိုထားသော ဥစ္စာကို အဘယ်သူပိုင်မည်နည်းဟု သူဌေး အား မိန့်တော်မူ၏။ ၂၁ထိုအတူ ကိုယ်အဘို့ ဘဏ္ဍာများကိုဆည်းဖူး၍၊ ဘုရားသခင်ရှေ့တော်၌ ဆင်းရဲသောသူ မည်သည်ကား၊ ထိုသူဌေးနှင့်တူသည်ဟု မိန့်တော်မူ၏။
ဒေါ်နယ်လ် ဘရန် ၂၀⁠၀၉ မတ်လတွင် London Sunday Times ၏ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိမ်းသိမ်းသည့် နည်းပညာ (သို့မဟုတ်) စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများတွင် ရင်းနှီးလုပ်ကိုင်သူ၊ (သို့မဟုတ်) သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိမ်းသိမ်းမှုလုပ်ငန်းများတွင် ငွေကြေးမြောက်များစွာ ထောက်ပံလှူဒါန်းကူညီသူ အချမ်းသာဆုံး ပုဂ္ဂိုလ် ၁၀ဝ စာရင်းကို ဖော်ပြထားသော Green Rich List စာရင်းတွင် အဆင့် ၉ ရရှိခဲ့သည်။
မိုက်ကယ်လ် ဘလွန်းဘက်ဂ် ဘလွန်းဘတ်သည် ၁၉၇၅ တွင် ယော့ရှိုင်းယားသူ ဆူဆန်ဘရောင်းနှင့်လက်ထပ်ခဲ့သည်။ ထိုပထမဆုံးဇနီးနှင့် သမီးနှစ်ဦးဖွားမြင်ခဲ့ပြီး ၎င်းတို့မှာ ဘဲမာ ( ၁၉၇၉ ) နှင့် ဂျော်ဂျီယာနာ ( ၁၉၈၃ ) တို့ဖြစ်ကြသည်။ ထိုသမီးနှစ်ဦးကို Born Rich ဟု အမည်ရသော ကျိကျိတက်ချမ်းသာသော သူကြွယ်သူဌေး၏ သားသမီးများအကြောင်းရိုက်ကူးထား သော မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်တွင် ထည့်သွင်းရိုက်ကူးခဲ့သည်။ ဘလွန်းဘတ်သည် ဆူဆန်ဘရောင်းနှင့် ကွာရှင်းခဲ့ပြီး နောက်ပိုင်းတွင် နယူးယောက်ပြည်နယ် ဘဏ်လုပ်ငန်းအုပ်ချုပ်ရေးမှူးဟောင်း ဒိုင်ယာနာတေလာနှင့် ချစ်ကြိုးသွယ် နေသည်ဟု ဆိုကြသည်။
အန်နီ ကောက်စ် ချမ်ဘာစ် သူမသည် Louis G. Johnson နှင့်လက်ထပ်ပြီး Katharine Ann (ပထမအိမ်ထောင် Jesse Kornbluth၊ ဒုတိယအိမ်ထောင် William P. Rayner) နှင့် Margaretta ( ပထမအိမ်ထောင် James F. Granite၊ ဒုတိယ အိမ်ထောင် ဒေါက်တာAlexander နှင့် တတိယအိမ်ထောင် Taylor Michael Rich) တို့ကိုမွေးခဲ့သည်။
ပရာဘတ်စ် Later he acted in "Pournami", "Yogi" and "Munna", an action-drama film came out in 2007, followed by the action-comedy "Bujjigadu" in 2008. In 2009 his two films were "Billa" and "Ek Niranjan". Indiaglitz called "Billa" stylish and visually rich.
ရိုမန် အေဘရာမိုဗစ်ချ် အေဘရာမိုဗစ်ချ် သည် လန်ဒန်၊ ဘယ်လ်ဂရာဗီးယားရှိ Lowndes Square တွင် ယူရို ၁၃.၈ ဘီလျံ ( ပေါင် ၁၁.ရ ဘီလျံ / အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၉.၃ ဘီလျံ ) တန်ဖိုးရှိ အိမ်ခြံမြေများပိုင်ဆိုင်မှုကို အကြောင်းပြု၍ Sunday Times Rich List 2008 တွင် ပါဝင်ခဲ့သည်။ ၂၀၀၈ မေတွင် United States Surgical Corporation ကိုတည်ထောင်သူ အမေရိကန်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင် Leon Hirsch ပိုင်ဆိုင်သည့် ကော်လိုရာဒို ဒေသ၊ အက်စ်ပန် အနီးရှိ ယခင် Wildcat Ridge အဖြစ်အသုံးပြုထားသော မြေဧက ၂၀ဝ ( ဝ.၈၁ ကီလိုမီတာ ပတ်လည် ) ကို ယူရို ၂၁.၂ သန်း ( ပေါင် ၁၈ သန်း၊ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၂၉.ရ သန်း ) ပေးပြီး ဝယ်ယူခဲ့သည်။ (၇၁)
ဓာတ်ငွေ့ဂြိုဟ်ဘီလူးများ Uranus and Neptune have distinctly different interior compositions from Jupiter and Saturn. Models of their interior begin withahydrogen-rich atmosphere that extends from the cloud-tops down to about 85% of Neptune's radius and 80% of Uranus's. Below the point is predominantly "icy", composed of water, methane and ammonia. There is also some rock and gas but various proportions of ice/rock/gas could mimic pure ice so the exact proportions are unknown.